पुर्बी रुकुमको विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ - AahaSanchar
Home आहा टक पुर्बी रुकुमको विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ
पुर्बी रुकुमको विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ
नाम : पञ्च बहादुर बोहरा
ठेगाना : सिस्ने गाउपालिका ६, रुकुम
हिजोआजको समय कसरी बितिरहेको छ ?
नियमित आफ्नो व्यापार व्यवसायमा बितिरहेको छ ।
पहिलेको पुर्बी रुकुम र नयाँ जिल्ला भएपछिको पुर्बी रुकुममा के फरक छ ?
विकासका रुपमा तुलना गर्दा पहिले र अहिले पुर्बी रुकुममा फरक छ । रुकुम पुर्बमा सदरमुकाम भएदेखि प्रशासनिक कामकाजदेखि यातायात, शिक्षा र जनताको दैनिकीमा समेत केहि राम्रो प्रभाव परेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सदरमुकामको नयाँ जग पनि बस्दैछ ।
तपाई उद्योग बाणिज्य संघ रुकुमकोटको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, तपाई संघमा हुँदा र नहुँदामा के फरक भयो जस्तो लाग्छ ?
म संघमा भएपनि रुकुमकोट क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित गर्न धेरै पहल गरेको छु । व्यापार व्यवसायको फराकिलो दायरा र कर प्रणाली सचेतनामा पनि केहि सहयोग पुगेको जस्तो लागेको छ ।
रुकुम पुर्बलाई थप विकास गर्न कसले के गर्नु पर्छ ?
मेरो बिचारमा पुर्बी रुकुम विकासका लागि दुर्गम क्षेत्रहरुमा सबै मिलेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । हातमा हात काँधका काँध राखेर सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ त्यसका साथै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
जननिर्बाचितहरुले पनि सानोतिनो काम गरेको भएपनि जनताको आवश्यकता हेरि काम गरेको देखिदैन । पुर्बी रुकुममा सदरमुकाम आएको करिब ३ महिनाजति भयो । सरकारी कार्यालयहरु क्रमसः थपिरहेका छन तर अझै पुर्ण रुपमा आएका छैनन् । पुर्बी रुकुमको मुहार फेर्न सरकारी सेवा सुबिधाको प्रभावकारीता सगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका पुर्बधारहरु प्रशस्त स्थापना हुनुपर्छ । प्रस्तुती ः सुवास बटाला
Previous articleरोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय उद्घाटन
Next articleबढ्यो माग्ने बुढाको रेट, एउटा फिल्म खेलेको १० लाख
पुरुषमाथी पनि महिलाले हिंसा गर्न थालेका छन
aahasanchar - March 14, 2018
aahasanchar - April 24, 2019